Baahin: Arbaca, Dec 21, Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. Khudbadihii madaxda Somalidu ay ka jeediyeen furitaanka wajiga 2-aad ee shirka wadatashiga Somalida; Ammaanka caasimada Puntland, Garowe oo aad loo adkeeyey; Isu-gacan-qaad mar kale dhex maray mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah. – Radio Daljir
Diseembar 21, 2011 12:00 b 0
Burcadbadeed Soomaliyeed oo siidaayey markab laga leeyahay dalka Talyaaniga
Baahin: Salaasa, Dec 20, Maxamed C. Kuuriya ~ Daljir ~ Bossaso. Wafti uu hogaaminayo afhayeen Shariif Xasan oo ka degay Garowe; Shirka wadatashiga Somalida oo berri ka furmi doona Garowe; Cutubyo ka tirsan ciidanka Jibuuti oo ka soo degay Muqdisho, lana hawl gali doona AMISOM; 7 maxbuus oo 18 bilood ku xirnaa xabsiga dhexe ee Laascaanood, maxkamadna aan la soo taagin, oo ka soomay raashinka.